Hambopom-pirenena: Olona Mahavita Azy Ve Ny Malagasy | Gasy ImpACT
3. Ara-tsosialy: Milaza miara-mahita isika raha miresaka ny fahantrana amin’ny endriny maro eny amin’ny fiaraha-monina misy antsika eny: ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fananan’asa, ny fisotroana rano madio sy fihinanana sakafo mendrika, ets. Betsaka ny Malagasy no miantehatra amin’ny karazana fikambanana nasionaly na iraisam-pirenena hiantoka ny andro sisa iainany.
4. Ara-teknolojika: Hiaraha-mahalala ny fahataran’ny firenentsika amin’ny resaka foto-drafitr’asa samihafa izay antoka fampandrosoana sy fampivoarana ny fiainam-pirenena. Tsy vitsy anefa ny Malagasy no liana sy manam-pahaizana amin’ireny sehatra maro ireny fa toa takona sy tsy hita tohiny ny fikarohana sy vokatra avy amin’izany.
5. Ara-javaboary: Lazatsika sy mampirehareha ny fananana zavaboary sy harena ankibon’ny tany. Tsy nataon’ny tanantsika anefa ireny fa nolovana. Toa tsy vitatsika akory ny mitrandraka azy ireny araka ny tokony ho izy fa toa ny mamotika sy mandroba aza no ataontsika. Ny olona avy any ivelany indray no mihazakazaka miaro azy ireny na koa manara-po maka izay tratrin’ny heriny.
6. Ara-dalàna: Mangetaheta fahamarinana sy fiaraha-monina mirindra ny Malagasy kanefa dia hiaraha-mahalala ny voka-dratsy hateraky ny kolikoly izay ifanaovana sy ny tsy fahasahiana mandray andraikitra eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, manjaka ny tsy fifampitokisana, samy manao izay ho afany ny tsirairay.
7. Ara-kolotsaina: Ny Soatoavina sy ny kolontsaina izay ijoroantsika dia toa ravarava tsikelikely eny. Ilay tsikalakalam-pihavanana rehareha toa voasolo tsikalakalam-bola. Ny zavatra “Vita Gasy” toa valalan’amboa ka isika tompony aza tsy tia.
Fehiny: Betsaka ny sehatra izay mahavoadona sy mandratra ny hambopontsika izay ilana fanarenana. Voalaza fa anisan’ny firenena mahantra indrindra eto an-tany i Madagasikara. Dia ho sanatria ve ho fara-olona indrindra eto an-tany koa ny Malagasy?
Mipitrapitra sisa ny maso, mingoningonina lavareny ny vava, mivonto ny fo rehefa hanjakan’ny hafa ny firenentsika.
Ny tantarantsika anie tsy mijanona amin’ny hoe Madagasikara voazanaka, Madagasikara rotiky ny adilahy politika, Madagasikara lavon’ny fahantrana, Madagasikara miantehatra lava amin’ny firenena avy any ivelany. Fa anjarantsika ny miara-manoratra ny tohin’ny tantara ka ho lasa Madagasikara mifoha, Madagasikara mandray andraikitra, Madagasikara mivoatra, mampandroso ny maha-olona mba ho tena reharehan’ny Malagasy.
Tsy voatery ho filoham-pirenena na ho solombavam-bahoaka daholo akory isika mianakavy vao afaka hitondra fanovana sy fivoarana eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika.
Izay tsy mahay sobika mahay fatram-bary
Izay fahavononana sy fahaizana kely misy eo amin’ny tsirairay dia ilaina hitondra fiovana lehibe (tsikelikely) eo amin’ny fiaraha-monina. Mba ho irin’olona fa tsy haniry olona foana isika Malagasy. Tokony hifanohana sy hifamporisika hatrany isika mba hahavita ny tandrify azy ny tsirairay.
Aza avela ho ny olona tia laza sy voninahitra ary fatra-pangoron-karena no hianteherana hampandroso ny fiaraha-monina misy antsika. Manana anjara biriky tandrify azy ny tsirairay amin’ny sehatra misy azy avy. Na ho hita-poko sy hita-pirenena na ao amin’ny takona dia tokony hanana fandresen-dahatra mandrakariva isika Malagasy handray andraikitra mba ho firenena tena manana ny maha-izy azy i Madagasikara.
Marina fa mora ny miresaka an’izany fa sarotra kosa ny manatanteraka kanefa rehefa tsy manao ny tokony ho atao isika dia eto isika mianakavy no raisina
Cette entrée a été publiée le samedi 30 novembre 2013 à 7:41 et taguée Ambopom-pirenena, Fahaleovantena Madagasikara, FIVPAMA Madagasikara, Madagasikara Mandroso, Malagasy Mahavita Azy, Rehareha-pirenena, SIM Madagascar, Toe-tsaina Malagasy, Vita Gasy, Vita Malagasy et publié dans Education, Lahatsoratra Malagasy, Politique, Social, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
" Thérapie de Choc à Madagascar : Ces Fripouilles qui Veulent nous Gouverner
Les îles Eparses: Les Malgaches ont-ils Peur de Revendiquer leurs Propres îles à la France? »